Shacabka Media | Argagaxisadda Alshabaab oo muddo kooban la wareegay Ceel-Waaq iyo Ciidankii Dawlada oo Kenya iska dhiibay
Argagaxisadda Alshabaab oo muddo kooban la wareegay Ceel-Waaq iyo Ciidankii Dawlada oo Kenya iska dhiibay
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay gudaha ugaleen degmada Ceel-waaq.
Goob joogayaal ayaa sheegay in boqolaal katirsan Ciidamada Al Shabaab ay la wareegeen gacan ku heynta magaalada iyagoo aan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamadii Dawladda Federaalka ee Kenya soo tababartay.
Ciidamada Al Shabaab oo xalay saqdii dhexe la wareegay magaalada ayaa wali ku sugan xarumaha muhiimka ah ee magaalada sida saldhigga Booliska iyo xarunta degmada,inkastoo sidda Shacabkamedia xog ku helayo ay magaaladda isaga baxeen muddo kooban kadib.
Ciidamadii saraakiishii Dowladda Federaalka ee Ceelwaaq ku sugnaa ayaa u qaxay dhanka gudaha Kenya, iyagoo halkaas iska dhiibay wararka qaar ayaa sheegaya in Al Shabaab ay saanado hub ah ka rarteen saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada dowladda.
Dhoocil 18-jir ah(Teen-Age)oo loo qabtay qaraxii London